Otrikafo : “mila fanitsiana ny tantaran’ny 29 marsa 47” | NewsMada
Otrikafo : “mila fanitsiana ny tantaran’ny 29 marsa 47”
“Hatramin’izay, lazaina fa hetsiky ny tia tanindrazana ny 29 marsa 1947. Diso izay ary fomba fijerin’ny mpanjanatany, nolovain’ny mpitondra napetraky ny vazaha.” Io no nambaran’ny avy amin’ny Otrikafo sy ny Front de libération nationale (FLN), Rajaonarison Jena-Edouard, teny Andravoahangy Ambony, afakomaly, ny amin’ny vela-kevitra nataon-dry zareo: “29 marsa 1947-2018: mahaleo tena tokoa ve isika?”
Inona ny 29 marsa 47? “Hetsika nataon’ny fitondran-janatany teto hisamborana ny mpikamban’ny MDRM, hamonoana ny afon’ny fitiavan-tanindrazana teo amin’ny Malagasy. Izay no tanjon-dry zareo, nefa nolazaina fa ny Malagasy no nihetsika”, hoy izy.
Nisy fomba isan-karazany nomaniny tamin’izany. Tao, ohatra, ireo olon’ny mpanjanatany nanefy fitaovam-piadiana misy soratra hoe MDRM, niampangana sy namonoana ny Malagasy tia tanindrazana.
Tokony hatao amin’ny fandaharam-pianarana ny fanitsiana ny tantara
Tokony hampidirina amin’ny fandaharam-pianarana izay fanitsiana ny tantaram-pirenena izay. Nefa mifandraika amin’ny programan’ny governemanta ny fandaharam-pianarana. Izay no ahitana hoe: miandany amin’iza ny governemanta nifandimby teto hatramin’izay? Inona koa, ohatra, ny olana tsy hampidirana ny momba ireo Nosy malagasy manodidina amin’ny fandaharam-pianarana ambaratonga faharoa? Tsy fiandaniana fomba fijery sy kolontsaina politika ny fitondrana izany.
Tsy anisan’ireo nitaky Fahaleovantena ny raiben’ireo mpitondra politika teto hatramin’izay, fa niaraka tamin’i Frantsa tamina kolontsaina Padesm miankin-doha. Izay ilay lohahevitra hoe: “71 taona aty aoriana: mahaleo tena tokoa ve isika?”
Misy fiandrianam-pirenena amin’ny vola ve, ohatra, eto, raha jerena ny ariary tsy mitsaha- mitotongana ny sandany? Tsy maintsy mila ny Banky iraisam-pirenena (BM) sy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) koa, ohatra, isika. Mampanjana-bola ny banky: raha fisamboram-bola any ivelany no atao, mampanan-karena ny any… Raha fisamboram-bola eto an-toerana, mampanan-karena ny eto.
Tolotra avy amin’ny vadin’ny filoha, Rajoelina Mialy: nahazo fitaovana ireo “Vehivavy miketrika” ao Toamasina 02/03/2021
Tonga ireo delegasiona 56: novahana ny olan’ny oniversite Toliara 02/03/2021
Fikaroham-bahaolana politika: mitaky governemanta ho an’ny tan-dalàna sy ny demokrasia ny MFM 02/03/2021